Taxanaha Cibrada Nolosha (Qisooyin La Yaab Leh ) | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Taxanaha Cibrada Nolosha (Qisooyin La Yaab Leh )
Qalinkii: Cabdi Cawiye, Qaybtii 3aad Nin sheekha ayaa wuxuu dhalay wiil keliya oo baari ama dhaga nugul ku caanbaxay. Markii uu ninkii sheekha ahaa wiilkiisii 10 jir gaadhay ayuu odaygii xanuunsaday oo uu wiilkiisii yaraa u yeedhay oo uu ku yidhi aabo waxa laga yaabaa inay taydii noqoto oo aan jiito ama dhinto ( ileen nin weyni wadkiisa wuu yaqaanaayo ) aabo hadii aan dhinto kolay dhaxalkeyga adiga leh maalinta aad 18 jir gaadho tag tuulada heblaayo oo u tag ninka saahidka ah ee cibaadada badan isagaa ayaan kuugu dhiibay dhaxalkaagii aabo ku dadaal cibaada waxa uu ku siiyana sideeda u ilaali. Mudo kadib waxaa geeriyooday odeygii, wiilkiina wuxuu qalbiga ku hayey inuu tago tuuladii marka uu 18 jir gaadho, markii uu gaadhay da’dii ayuu wiilkii tagay tuuladii oo uu u tagay saahidkii cibaadada badnaa wuuna isu sheegay.
Saahidkii wuxuu inankii ku yidhi
jihadaa(intuu meel u tilmaamay) aad oo lix (6) saac soco, ka dibna soo noqo oo waxaad soo aragto ii soo sheeg.
Wiilkii sida la amray buu sameeyey oo jihadii loo diray buu u socdaalay, wixii ugu horreeyey ee uu arko waxay asagoo maraya afka hore ee wadiiqad(waddo) u dhaxaysa laba buurood ayaa wuxuu ku arkay wax yar oo dhalaalaya oo wadada dhex yaalla, wixii buu usha saas ugu dhuftay, bug! qarax baa dhacay labadii buurood baa is qabsaday isla markii uu usha ugu dhuftayba! dhinaca ayuu ka wareegay oo socodkiisii sii watay, dabadeed wuxuu arkay guri qurux badan, gurigii ayuu albaabkiisii furay mise ur buuba dareemay sidaas ayuu u fiiriyay waxa gudaha ka soo urayana wuxuu arkay in saxaro ka buuxdo wuu iska soo xidhay socodkii ayuuna sii watay.
Wali lixdii saac ma dhammaan sidaa awgeedna socodkii ayuu sii watay, dhacdadii saddexaad ee uu la kulmana waxay ahayd inuu arkay rati AWR gaajo la soo gotay oo dhex taagan dhul Illaahay doog iyo barqaaqo ku mannaystay balse aanu cunayn naqa iyo doogga ka baxay.
Wuu ka sii socday oo misna wuxuu la kulmay rati kale oo fadhiya oo ay calooshiisii iyo qaybaha jidhkiisa ay iska dal dalanayaan weere, dawaco, dhurwaa, habar dugaag oo dhan dan se aan ka lahayn oo iska daaqaya oo naqa iska raamsanaya.
Wuu iska sii socday ugu dambayntii wuxuu la kulmay gabadh qurxoon oo gadaal gadaal u sii ordaysa, gabadhii buu daba orday way ka sii cararaysaa wuu gaadhi kari waayay,
dabadeed wuu iskaga hadhay inyar kadibna wuxuu arkay gabadhii oo kusoo oraday wuu ka cararay oo ay daba carartay ilaa wakhtigii ka dhamaaday lixda saac ahaa kolkaasuu iska soo laabtay.
1. wixii dhalaalayay ee aad usha ku dhufatay ee isla qarxay ee labadii buurood is qabsadeen waa FITNO, fitnadu marka hore way huruddaa marka se la toosiyo dhib weyn baa yimaada iyo khasaare weyn. tusaale aan ku darsado anigu (xassan ahaan) nin ayaa nin dilaya, hadaba ninkaas kali ah ee dhintay ayadoo si sharciga islaamka waafaqsan looga heshiin karo baa mararka qaarkood inta fitnadaas yar la huriyo ay dhashaa in 100 nin oo kale ay ku dhintaan.
2. gurigii quruxda badnaa ee aad la kulantay gudahana saxaradu ka buuxday waa TAARIKU SALAAD ama qof salaadii ka tagay oo ma tukade ah, waayo qofka aan tukani korka labis buu xidhanyahay, jidhka wuu qurxinayaa oo dushiisa wuu qurxin karayaa balse qalbiga waxaa ka buuxa saxaro, waayo waa qalbi aan Alle xusin oo aan u sujuudin oo aan xasuusan.
3.awrkii kaynta barwaaqada ah taagnaa kana qatanaa waa bakhyalka ama dhabcaal, waayo bakhaylku xoolihiisa cidna wax kama siiyo asna kuma baahi baxo, oo wuu ka qatan yahay waana arrin dhibteeda leh .
5. gabadhii kaa cararaysay, waa ADDUUNYO adduunyo waligaa daba orod gaadhi maysid. Marka aanad danaynayn ee aad ilaahay iyo aakhiro u godo iyadaa kusoo raadsanaysa.
Wuxuuna saahidkii ku yidhi waa kaa dhaxalkaagii abahaa iigu kaa dhiibay
wiilkii intuu ooyey ayuu gartay dhaxalka wax ku oolka ah ee aabihii uga tagay kuna camal falay